ka iibso fadhiga ugu raqiisan internetka! - Somaliska
Homeka iibso fadhiga ugu raqiisan internetka!
ka iibso fadhiga ugu raqiisan internetka!
5 Firkado ee ugu wanaagsan ee aad ku abuuri karto Riyadaada guri cusub Bisha Ramadaanka!
Miyaad xiisaynaysaa inaad isbeddel ku abuurto gurigaaga? Marka la eego Ramadaanka, waxaa jira dad badan oo doonaya inay ka faa’iidaystaan ​​oo si fiican u habeeyaan guriga si aad u wanaagsan Ciidda.
Waxaa jira dad badan oo marti ku ah inta lagu jiro ciidda. Sidaa darteed dad badan aad bay muhiim ugu tahay in gurigu fiican yahay oo aad ula dhacsanaan karaan qurxintaada qurxoon. Haddaba waxaanu ku siin doonaa 5 talo oo ay khubaradu soo jeediyaan oo ku saabsan sidii aad gurigaaga uga dhigi lahayd mid wanaagsan inta lagu jiro Ramadaanka.
Xasuusnoow in aad mar walba ka iibsan karto alaab guri oo adigoo u bixin karan qaab aan Ribo Laheyn Riix hada oo booqo www.folketsmobler.se.
1. Dooro alaab guri oo ku habboon gurigaaga
Waxa ugu horreeya ee maskaxda lagu hayo waa in alaabta guriga ay tahay qaybta ugu muuqata gurigaaga. Tani waxay khusaysaa fadhiga iyo alaabta guriga, sida miisaska cuntada iyo kuraasta cuntada. Waxaad iibsan kartaa alaab guri oo gaar ah oo aad u qurux badan, sidoo kale jilicsan oo tayo sare leh.
2 iibso alaabta muraayadaha ah ee u dhigma alaabtaada kale.
Habka ugu wanaagsan ee dad badan ay u isticmaalaan inay ku abuuraan jawi cusub gurigooda, waa inay ku daraan alaabta muraayadaha ah. Waxaa jira, tusaale ahaan, shooladaha leh kuleylka, ama xafiisyada ama miisaska muraayadda.
Waxaa jira muraayado leh dheeman waxaana jira muraayado caadi ah sidoo kale. Ka fakar waxa ku habboon gurigaaga iyo waxa aad jeceshahay, oo gurigaaga ku samee isbeddel fiican oo leh alaabta muraayadaha cusub.
3 Haddii aad rabto, waxaad dooran kartaa midabyo dadka ka farxiya, oo ka tarjumaya shakhsiyaddaada alaabta guriga.
Waa wax caadi ah in la doorto maqaar madow ama maqaar cad, ama maro cawl markaad dooranayso fadhiga. Laakiin waxaa jira dad badan oo ku dhiiranaya inay beddelaan midabbada wax ka duwan, sida maro buluug ah ama maro casaan ah. Waxaad soo jiidan kartaa martidaada iyo naftaada adiga oo dooranaya midab ay isticmaalaan naqshadeeyayaasha sare.
4 Go’aanso haddii aad rabto fadhi maqaar ama fadhiga marada.
Labada fadhiga ee maqaar iyo fadhiga dharka ayaa aad u fiican. Doorashadu waxay ku xiran tahay naftaada, iyo dareenka aad rabto inaad ku abuurto gurigaaga ka hor Ciida.
Waxaad dooran kartaa fadhi weyn oo maqaarka ah oo ku habboon booqdayaasha. Aad bay u fiican yihiin oo gaar bay u yihiin. Xasuuso in haddii aad doorato fadhiga maqaarka, waxaa fiican inaad ku darsato miiska qaxwada oo sidoo kale ku jira maqaarka. Waxa kale oo aad dooran kartaa kursiga TV-ga ee maqaarka ku jira.
Haddii aad dooratid fadhiga dharka, waxaad heli doontaa qalab jilicsan oo wanaagsan oo ay ku qanacsan yihiin qoyska oo dhan. Iyada oo fadhiga dharka, waxaad dooran kartaa miiska qaxwada dhalada ah. Waxay noqon doontaa mid aad u fiican oo ay weheliso fadhiga marada ah.
5. Ma rabtaa in miiska uu ahaado mid weyn ama mid yar?
Waxa kale oo aad dooran kartaa in aad rabto in miiska qaxwaha uu noqdo mid weyn ama yar. Waxaa jira miisas kafeega ah oo waaweyn oo wanaagsan, oo la socda miisas dhinacyadeeda oo yaryar. Kuwaas waxaa la soo saari karaa haddii aad marti ku leedahay ama aad u baahan tahay miisas dheeraad ah oo ku yaal fadhiga fadhiga ee kala duwan.
Dhammaan alaabtaada waxaad ka iibsan kartaa Boga Folkets Möbler. kuwaasi oo haya alaab guri oo aad u fiican oo Sanado badan isticmaali karto.
Shirkada Waxay Dukaamo ku leedahay Borås iyo Tranås. Waxa kale oo aad ka iibsan kartaa boggooda internetka, www.folketsmobler.se. Haddii aad rabto, waxaad had iyo jeer ku iibsan kartaa adigoo qeyb qeyb u bixinaya bixintaasi oo ribo ama dulsaar laheyn. Macaamiisha Folkets Möbler aad bay u badan yihiin, waxayna inta badan soo noqdaan sababtoo ah waxay aad ugu qanacsan yihiin tayada alaabta guriga.